DubaiCoin စျေး - အွန်လိုင်း DBIC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DubaiCoin (DBIC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DubaiCoin (DBIC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DubaiCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
DBIC – DubaiCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DubaiCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DubaiCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DubaiCoinDBIC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.726DubaiCoinDBIC သို့ ယူရိုEUR€0.619DubaiCoinDBIC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.557DubaiCoinDBIC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.668DubaiCoinDBIC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.56DubaiCoinDBIC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.61DubaiCoinDBIC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč16.21DubaiCoinDBIC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.73DubaiCoinDBIC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.968DubaiCoinDBIC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.02DubaiCoinDBIC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$16.31DubaiCoinDBIC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$5.63DubaiCoinDBIC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.91DubaiCoinDBIC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹54.32DubaiCoinDBIC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.122.99DubaiCoinDBIC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.998DubaiCoinDBIC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.11DubaiCoinDBIC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿22.61DubaiCoinDBIC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥5.05DubaiCoinDBIC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥77.5DubaiCoinDBIC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩861.57DubaiCoinDBIC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦281.94DubaiCoinDBIC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽53.31DubaiCoinDBIC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴20.13
DubaiCoinDBIC သို့ BitcoinBTC0.00006 DubaiCoinDBIC သို့ EthereumETH0.00195 DubaiCoinDBIC သို့ LitecoinLTC0.0137 DubaiCoinDBIC သို့ DigitalCashDASH0.00847 DubaiCoinDBIC သို့ MoneroXMR0.00854 DubaiCoinDBIC သို့ NxtNXT59.39 DubaiCoinDBIC သို့ Ethereum ClassicETC0.109 DubaiCoinDBIC သို့ DogecoinDOGE216.14 DubaiCoinDBIC သို့ ZCashZEC0.00916 DubaiCoinDBIC သို့ BitsharesBTS28.65 DubaiCoinDBIC သို့ DigiByteDGB24.83 DubaiCoinDBIC သို့ RippleXRP2.62 DubaiCoinDBIC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0256 DubaiCoinDBIC သို့ PeerCoinPPC2.45 DubaiCoinDBIC သို့ CraigsCoinCRAIG338 DubaiCoinDBIC သို့ BitstakeXBS31.61 DubaiCoinDBIC သို့ PayCoinXPY12.94 DubaiCoinDBIC သို့ ProsperCoinPRC93 DubaiCoinDBIC သို့ YbCoinYBC0.000398 DubaiCoinDBIC သို့ DarkKushDANK237.96 DubaiCoinDBIC သို့ GiveCoinGIVE1606.22 DubaiCoinDBIC သို့ KoboCoinKOBO168.95 DubaiCoinDBIC သို့ DarkTokenDT0.669 DubaiCoinDBIC သို့ CETUS CoinCETI2140.45